Indlela esikhundleni isikhathi ibhande "Priora" ngezandla zakhe?
Negesi ukusatshalaliswa indlela - lokhu ingenye izingxenye eziyinhloko abamelwe kwanoma iyiphi imoto. Ngakwelinye ihlangothi, ibhande isikhathi kuba a engeyokuqala eyinhloko. Kuyinto kusukela ezinhle zalo kuzoncika ikusasa motor - noma-ke ngizoya ngokushelela, amakhulu ezinkulungwane amakhilomitha, noma iyoba ezingenamsebenzi futhi iyoba phakade. Kulo mBhalo kwenzeka nje ngenxa igebe ibhande, okuyinto kakhulu engathandeki ngoba valve futhi yonke yangaphakathi omlilo injini iyonke. Ngakho-ke, ukuze kube nesiqiniseko sokuthi ekusebenzeni injini, okungenani kanye ngesonto kumele kukhiqize ibhande ukuhlola sikhala bese ushintsha uma kunesidingo.
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi esikhundleni ibhande isikhathi "Priora Vaz" ngezandla zakhe?
Okokuqala sidinga unqamule negative esibulalayo ibhethri. Naphezu kweqiniso lokuthi ibhande isikhathi ayinakho ukuxhumana ngqo zikagesi, kulesi sigaba sidinga ukususa ibhande alternator. Kungaleso sikhathi kuphela lapho usungaqala ahlukanisa bese ufake izakhi ezidingekayo.
Manje sidinga ukuletha piston ka uMbhalo kuqala isikhundla BMT, bese usebenzisa Spanner 15 ukuze kuhlukaniswe amabhawudo yokuphepha roller tensioning. Timing ibhande uqobo "Priora Vaz" kufanele kancane buthaka. Ngenxa yalesi pivoted tensioner roller, futhi lapho efika elamukelekile, isb lapho lo mshini ngeke dangle, usisuse camshaft kanye isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo kwe-futha amanzi.
Ukujikisa screw ukuthi kuvikela idrayivu isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo, le crankshaft kumele kuvikelwe ngokumelene ngokushintshana. Kulokhu, susa i-plug in the izindlu bamba usebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela enkulu ukubamba oluthi amazinyo ligcina uthi lokuphotha luzungeza.
Yini okufanele uyenze ngokulandelayo?
Okulandelayo, thatha ezandleni ukhiye phezu 17-kubuhlungu futhi uhluthulele lo isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo crankshaft. Isinyathelo esilandelayo ukuze uyisuse kusukela Washer bese ususa alternator drive isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo. Ngemva kwalokho, ukususa puck kusukela isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo isikhathi futhi kukhishwe ibhande.
Okusele kuphela ukusungula indlela entsha ukuhlola isimo yayo senzo. Kodwa ngaphambi kokuba lokho kubalulekile ukuphawula ukuthi indawo ukufakwa kumele kube mahhala uthuli, ukungcola kanye amafutha. Ngakho-ke, ubuso bomhlaba idivayisi kusetshenzwe ngokucophelela ngendwangu ugcwala uphethiloli noma utshwala. Kuphela ngemva kokuba akhishwe, setha isikhathi ibhande "Priora Vaz" ku indawo evamile. Izinyathelo ezilandelayo zenziwa efanayo ukususwa, kodwa oda reverse. Into kuphela okufanele ugxile, - indawo idrayivu isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo generator. Kufanele ukufakwa kuphela kwelinye direction. Kulesi kudivayisi inkatho niya igagasi isikhathi isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo drive. Ngemva kokufaka ungakhohlwa ukulungisa isimo esishubile imininingwane.
Isikhathi "Priora" ibhande - lapho ushintsho?
Abakhiqizi Sisikisela esikhundleni idivayisi zonke amakhilomitha ayinkulungwane 80-100. Nokho, kufanele ukuxilonga kube njalo ibhande ngoba imifantu futhi izinyembezi. Ziyakwazi phezu akufanele kube. Uma kwatholakala okungenani oyedwa ufa, kubalulekile ukuba ukushintsha ibhande isikhathi "Priora" Vaz. Kungenjalo, ukuqhekeka ezincane zikhule zibe zinkulu futhi avuse ibhande eziphukile.
Incazelo Suzuki Bandit ibhayisikili 400 umgwaqo
Ukwabela idivayisi, ukusebenza isikhathi. Yangaphakathi omlilo injini: mshini ukusatshalaliswa igesi
Tyres Sava Eskimo Stud: ukubuyekezwa. Sava Eskimo Stud: umenzi, ukuhlolwa kanye nezithombe
Gel ibhethri: ukubuyekezwa. Gel ibhethri: design futhi izici
Car "Moskvich-403": ezibekiweko lobuchwepheshe, ukuhleleka okuhle, izithombe
Dunlop SP Ezemidlalo 01 amathayi
Khuluma mayelana angioedema. Izimpawu okunjena iguliswa nosizo lokuqala
Denis Hromyh: Biography nemisebenzi
Umphetho Roof: izici nokuhlela isithombe
Kungani amazwe ase-Asia ngokuthi emazweni aseMpumalanga
Umlingisi Drew Fuller: Biography futhi Filmography izinkanyezi ngamanye
Incwadi Red zomhlaba. Izimila nezilwane "Red Book"
Egor Sesarev: Biography nemisebenzi
Folk amabika Ikhuluma ngoZiqu-zintathu
Indlela ukuya kumodi ephephile Windows 8? Kanjani ukuqala ikhompyutha yakho kwimodi yokuphepha, i-Windows 8?
Indlela thunga unodoli ngosizo Izimali ezikhona?
UVladimir Potanin: Biography, empilweni yakho